Ukuhamba uhambo - Ngawaphi amacebiso angcono onokuwasebenzisa? | Bezzia
USusana godoy | 14/01/2022 12:00 | Uhambo
Hamba kuhambo, fumana iindawo ezintsha kwaye uqhawule Zintathu izinto esidla ngokuzithanda kakhulu nezihamba kunye. Ukongeza, kufuneka kuthiwe ziyimfuneko ngokwenene kwimpilo yethu yengqondo. Ngoko ukuba ucinga ngokuthabatha uhambo, kuhle ukucwangcisa yonke into kwangaphambili ukuze ungaphoswa yiyo nantoni na.
Ngaphandle koko, sikushiya nawe ezona ngcebiso zilungileyo ukuze ukwazi ukuzisebenzisa. Icebiso eliluncedo kakhulu esilaziyo kodwa esingasoloko siliqaphela de kube kusemva kwexesha. Ngoko ke, sikwenzele uluhlu. Kushiyeke kuphela ukuba uyifunde ngokuzolileyo kwaye uyibhale kakuhle. Iholide ezimnandi!
1 Musa ukuyiphatha yonke imali kwindawo enye
2 Betha ukwazi iindawo ezikufutshane
3 Yenza uphando ngaphambi kokuba uhambe
4 Ukuba ufuna ukugcina, yiba bhetyebhetye
5 Musa ukunxiba iimpahla ezininzi xa uhamba uhambo
Musa ukuyiphatha yonke imali kwindawo enye
Akukhathaliseki nokuba zeziphi iindlela zothutho esiza kuzisebenzisa kuhambo. Eyona nto ingcono kukuba ungaze uphathe yonke imali kwindawo enye. Unokuthwala ezinye kunye nawe ezipokothweni zakho kwaye ezinye kwisipaji sakho, njl. Kungale ndlela kuphela esiya kuqinisekisa ukuba, kwimeko ethile engalindelekanga, akufuneki siphulukane nayo yonke into. Kuyinyani ukuba imali elahlekileyo kufuneka siphathe into kodwa hayi kakhulu. Kuhlala kucetyiswa ukuba ube nekhadi apho unokuthi ungabinayo imali eninzi kakhulu kodwa eyaneleyo yohambo kwaye ayisiyiyo apho uneendleko eziqhelekileyo okanye amatyala akho aseleyo. Kakade ke, akusoloko kusenzeka ukuba kubekho ngaphezu kwesinye kwaye akuyomfuneko.
Betha ukwazi iindawo ezikufutshane
Kuyinyani ukuba xa besibuza ukuba luphi uhambo lwamaphupha ethu okanye le ndawo sifuna ukuya kuyo, baya kuphupha amagama akude njengomthetho jikelele. Ewe, kufuneka kuthiwe oko ngamaxesha amaninzi siya kufumana izothuso ezinkulu ukuba sihlala kufutshane nalapho sihlala khona. Kuba sikwangqongwe luluntu kunye nezixeko ekufuneka sizihlole. Ukongeza, ngokuqinisekileyo siya kufumana izibonelelo ezintle njengoko zingezizo iindawo zabakhenkethi.
Yenza uphando ngaphambi kokuba uhambe
Ukuba ekugqibeleni uthathwa yile ndawo ikude, kuyafaneleka ukuphanda kancinci ngayo. Ngoku sinayo itekhnoloji ezandleni zethu kwaye ngokucofa sinokwazi onke amasiko, i-gastronomy yayo kunye neendawo ezityelelwe kakhulu. Ke, akukhathazi ukuba unento oyicwangcisiweyo malunga nento oza kuyindwendwela. Ewe, kuyinyani ukuba xa sele zikhona ezi zicwangciso zinokutshintsha ngokuxhomekeke kwixesha, kodwa ubuncinci, sinokuba neendawo ezithile ekufuneka sizibone engqondweni.
Ukuba ufuna ukugcina, yiba bhetyebhetye
Enye ingongoma ebalulekileyo xa usenza uhambo kukufuna ukonga kwiindleko. Ewe, ukuba awufuni ukuchitha imali eninzi kakhulu kuhambo, kufuneka ube bhetyebhetye ngokweentsuku okanye iiyure ngokubanzi. Kuba ukuba ujonge usuku oluthile kwaye siya kwimpelaveki, amaxabiso aya kunyuka. Kwenzeka into efanayo nakwezinye iindawo, yiyo loo nto sele sikucebisile ukuba ubheje kwiindawo ezikufutshane okanye iindawo ezingaziwayo njengezo sicinga ngazo.
Musa ukunxiba iimpahla ezininzi xa uhamba uhambo
Elinye lawona maxesha oyika kakhulu lixesha lokupakisha. Kuba kubonakala ngathi sifuna yonke into nangaphezulu, kodwa ke sisebenzisa ngaphantsi kwesiqingatha. Ngoko, ngokuxhomekeke kwixesha esiya kunxiba iimpahla ezisisiseko kunye nezicathulo ezikhululekile kakhulu zosuku kwaye enye esinokuyidinga ngobu busuku. Kungcono ukubheja kwiingcamango ezisisiseko ezinokuthi kamva zitshintshe isitayile kwaye zisinike inkangeleko yesibini nje ngokongeza izixhobo. Into eyenzeka ngengubo emnyama, okanye ngee jeans kunye neebhulukhwe ezimhlophe, umzekelo. Ngoku okuseleyo kukuba ukonwabele ukuba uthatha uhambo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » yokuPhila » Uhambo » Iingcebiso ezilungileyo zokuhamba
Imikhwa esempilweni ekunceda uzive ulungile